Monday October 14, 2019 - 19:29:27 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Tartankii doorashada Madaxtinimada dalka Tuunis ayaa soo dhamdaday shalay galinkii dambe waxaana la shaaciyey in Musharaxa Madaxa banaan ee Qeys Saciid uu ku guulaystay tartanka uuna noqonayo madaxweynaha rasmiga ah ee wadankaasi.
Qeys Saciid oo ahaa Musharax madax banan oo aan ka tirsaneyn Xizbiyada siyasaded ee dalka ayaa si rasmi ah u shaaciyey inuu doorashada ku guuleystay, isaguna uu yahay madaxweynaha dalka Tunis, Kalimad uu kula hadlayay taageerayaashiisa ayuuna ku sheegay, in fatqaladihi dalkan so maray uu sida ugu dhaqsiyaha badan wax uga qabanayo, xaaladana uu kusoo celin doono mid wanagsan oo la jaanqaadeysa wadamada caalamka.
Telefeshinka Rasmiga ee ku hadla afka dowladda Tuunis ayaa shaaciyay Qeys Saciid uu ku guulaystay doorashada balse illaa iyo hadda war rasmi ah kamasoo bixin guddiga doorashooyinka oo ku aaddan guusha uu sheegtay musharraxa Saciid.
War rasmi ah oo kasoo baxay guddiga doorashooyinka madaxa banaan ee Tuunis ayaa lagu sheegay in Ninkan uu kaga guuleystay musharaxii la tartamayay oo ahaa Nabil Al Qarawi codad gaaraya 72%, waxaana natiijadaasi si diiran u canbaareyey Xizbiga lagu magacabo Qalbiga Tuunis ee uu matalayay Nabil Al Qarawi.
Nabiil Al Qarawi oo ah Musharaxa laga awood badiyey ee dalka Tunis, ayaa qiray in looga adkaaday doorashadii dhacday wuxuuna helay wax aan ka badnayn 27% sida lagu sheegay natiijada kasoo baxday guddiga doorashooyinka dalka Tuunis.
Xarakada Al Nahda ee kajirto dalka Tunis, ayaa hambalyo u dirtay Madaxweyne Siciid, waxa ayna ansaarteeda ugu baaqday inay ku biiraan banan baxyada lagu taageeraayo ninkan ee ka soconaya guud ahaanba dalka Tunis, Kumanaan qof ayaana markiiba isugu soo baxay Wadada Xabiib Burqiiba ee kutaala Bartamaha caasimada dalka Tunis.
Siyaasiyiinta taageersan Nidaamkii Bin Cali ayaa ku eedaynaya madaxweynaha cusub in uu geed fadhi u yahay Ururka Ikhwaanka uuna ku shaqeyn doono siyaasadooda, hoggaamiyaha cusub ee Tuunis ayaa si hordhac ah usheegay in socdaalkiisa ugu horreeya uu ku tagi doono wadanka Aljzaa'ir si uu ubogaadiyo shacabka kacdoonka wada.